Tag: wordpress seo | Martech Zone
Zoma 6 Novambra 2020 Zoma 6 Novambra 2020 Douglas Karr
Nihaona tamin'ny mpanjifa iray izay niady tamin'ny laharan'ny milina fikarohana ahy aho. Rehefa nandinika ny rafitry ny fitantanana ny atiny (CMS) aho dia nitady fanao faran'izay tsara izay tsy hitako. Alohan'ny hanomezako lisitra hanamarinana miaraka amin'ny mpamatsy CMS anao dia tokony holazaiko aloha fa TSY misy antony tsy tokony hisian'ny rafitra fitantanana atiny intsony ny orinasa iray. CMS iray dia hanome anao na ny ekipa marketing anao
Inbound Brew: Alefaso mivantana avy amin'ny WordPress ny paikadinao amin'ny marketing
Zoma 4 Novambra 2016 Douglas Karr
Ny isan'ny vahaolana sy ny fahasarotan'ny mpiara-miombon'antoka miasa izay manitatra WordPress dia tena mahatalanjona. Inbound Brew dia orinasam-barotra nomerika amin'ny serivisy, fampivelarana tranonkala ary orinasam-pampandrosoana lozisialy, izay nanampy ireo orinasa kely hampiasa marketing amin'ny atiny mba hitarika ny firotsahana sy ny fitarihana. Namoaka plugin marketing inbound izao izy ireo izay manome ny fitaovana ilaina rehetra hanaovana izany - mivantana avy amin'ny WordPress! Ny plugin dia manana fiasa marobe izay mandrindra ny varotra atiny miaraka amin'ireo ezaky ny varotra miditra, ao anatin'izany ny: Lead
WordPress SEO, SEO eo an-toerana, SEO amin'ny horonan-tsary, SEO Ecommerce? Yoast!
Alahady 9 Febroary 2014 Alakamisy 31 martsa 2016 Douglas Karr
Joost de Valk no nanao an'io. Izy irery ihany, ny plugins WordPress-ny no fototry ny ezaka rehetra hanatsarana ny tranokalanao WordPress ho an'ny motera fikarohana. Nampiasa plugins hafa aho hitantanana ny fanovana robots.txt, htaccess, fananganana sitemaps, ahafahan'ny mpanoratra sy microdata ara-tsosialy… ary tsy milamina izy ireo, tsy naharaka ny fanovana algorithm ary mbola tsy nahavita. Raha ny marina dia heveriko fa ny WordPress dia tokony hividy Yoast fotsiny ary hampiditra mivantana ireo plugins tsy mampino an'i Joost